Maxkamadda cadaaladda ee ICJ oo soo saartay WAR ku saabsan arrinta BADDA SOOMAALIYA !! - Caasimada Online
Home Warar Maxkamadda cadaaladda ee ICJ oo soo saartay WAR ku saabsan arrinta BADDA...
Maxkamadda cadaaladda ee ICJ oo soo saartay WAR ku saabsan arrinta BADDA SOOMAALIYA !!
Muqdisho (Caasimada Online) – Bishan July 13-dii ayey ahayd markii ay Dowladda Federalka Somalia u gudbiyeen Maxkamadda Calaamiga ee Caddaaladda “The International Court of Justice” ee ICJ dacwad ka dhan ah Dowladda Kenya, kuna aadan muranka milkiyadda xuduud-baddeedka Indian Ocean.
Sarkaal ka tirsan Maxkamadda ICJ ayaa u xaqiijiyey Wargeyska The Star ee ka soo baxa Kenya inay Dowladda Somalia soo gudbisay Dukumentiyo ay ku sheeganayso Lahaanshaha xuduud-baddeedkaasi, isla markaana lagu kala baxo Sharciga Caalamiga.
Sarkaalka oo aan magaciisa la shaacinin kana tirsan Waaxda Warfaafinta ee Maxkamadda Caalamiga ee ICJ ayaa sheegay inay Dowladda Somalia soo buuxisay gal-dacwadeedkeeda xilligii kama dambeynta ee loo qabtay.
Dowladda Kenya ayaa la filayaa inay iyagana Dukumentiyadda ay ku sheeganayo milkiyadda xuduud-baddeedkaasi u gudbiyaan Maxkamadda Caalamiga ee ICJ ugu dambeyn bisha May 27-da ee sannadka soo socda ee 2017-ka.
Muran-baddeedka u dhexeeya Somalia iyo Kenya ayaa waxaa uu socday muddo 6-sanno ah, iyadoo xuduud-baddeedkaasi cabirkiisu ka badan yahay 100-KM oo isku wareeg ah, kaasi oo la sheegay inaay ka buuxaan Shidaalka iyo kheyraadka kale ee dabiiciga.